Growthlọ ọrụ na-eto eto laser - China Laser Hair Manufacturers, Suppliers
650nm 808nm Laser na ọkụ ọkụ ntutu ntutu isi / laser ntutu regrowth igwe maka ntutu isi ntutu
Usoro ọgwụgwọ laser dị ala bụ ọdịdị dị nchebe nke ọkụ / ọkụ ọkụ n'okpuru nyocha maka ọtụtụ ahụike na-egosi. A na-eji ya na-emeso ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ntutu isi nke nwoke na nwanyị na-enwekarị, androgenetic alopecia ma ọ bụ usoro nhọta.
A na-akpọkwa ọgwụgwọ laser dị ala na-agwọ ọrịa ọkụ na-acha ọbara ọbara, laser oyi, laser dị nro, biostimulation na photobiomodulation.
Kacha ọhụrụ ala ozo laser mgbochi ntutu ọnwụ usoro igwe 650nm diode laser ntutu regrowth igwe
Egosi: eji maka…
1. Ngwọta ntutu na ntutu dịwanye elu maka ma nwoke ma nwanyị
2. Ọgwụgwọ ntutu isi nke oke endocrine kpatara
3. Ọgwụgwọ ntutu isi nke nsogbu ọrịa na akwara na-akpata
4. Ọgwụgwọ maka ntutu isi ịmụ nwa
5. Ọgwụgwọ maka alopecia areata, iji mee ka ike ntutu na nlekọta ntutu isi mgbe ntutu isi gasịrị.
laser ma duzie igwe ntutu ntutu isi
1. agehịa aka n'isi, belata ntutu akwara, na-akpali ndị
2. Mee ọ rụọ ọrụ papilla dermal
3. Mee ka ọrụ papilla dị ike
4. otekwalite mkpụrụ ntutu nke ntutu isi
5. chịkwa ihe nzuzo nke sebaceous glands
6. Mee ka mkpụrụ ndụ ntutu nne nne dịkwuo elu
Sano CE Kwadoro ntutu isi ntutu isi LLLT igwe regrowth igwe / Laser Hair Growth
Igwe na-emegharị ntutu dị iche iche nke laser na atọ na-eduga
650nm laser: Mee ka ntutu dị iche iche, meziwanye ikike ịmaliteghachi nke eriri collagen ma kwalite metabolism.
808nm IR laser: Mee ngwangwa mgbasa ọbara, kwalite nri nri, meziwanye ahụ ike na ntutu
Red Ikanam ìhè: Nwere ike ime ka cell ọrụ ụba, akwalite mkpụrụ ndụ metabolism, mee ngwangwa ọbara mgbasa, ịchịkwa mmanụ secretion.
Yellow Ikanam ìhè: Na wavelength 580nm nwere ike dị mfe ma na-emeso akpụkpọ mmetụta ọsọ ọsọ n'ụzọ dị irè
Blue LED light: Gbuo nje na-akpata nje na-egbu egbu, gbuo ero na zoro ezo na ntutu isi
SH650-1 Igwe Ọkwa dị ala + Igwe Igwe Ntutu Ntutu Ntugharị nke ntutu isi
SH650 Laser Therapy bụ ngwaọrụ ọgwụgwọ laser dị ala kachasị dị ike ma dị irè ugbu a na ahịa mba ụwa. Iji 650nm diode laser (5mw), 808nm IR laser (5mw) na ụdị ọkụ atọ dị iche iche, SH-650 nwere ikike zuru oke ntutu niile ma na-enye ike zuru oke iji banye ntutu nke ọma, si otú a na-ebuli nsonaazụ maka onye ọrịa ahụ. .
Ọgwụgwọ Uwe Ọgwụ Laser- ọgwụgwọ ntutu ntutu laser na Sano laser
Igwe ntutu laser na-eji laser-ọkwa laser iji nyefee ọkụ ọkụ dị ala, nke dị ala na isi gị. Laser ọgwụ yiri atọ osisi. Dị ka mmiri na mmiri na-edozi ahụ site na ahịhịa, ike ọkụ na-amịkọrọ ntutu gị ka ntutu gị wee nwee ike na-eto. Ka ọkụ ahụ na-abanye, microcirculation na-abawanye, ya mere na-ekesa ọbara na nri ndị ọzọ bara ụba na ntutu isi. Igwe ọkụ laser dị ala na-akpali ọrụ cellular na ahịhịa gị iji nyere aka belata ntutu ntutu ma na-enyere ntutu isi.
808nm laser 650nm laser ọnwụ ọnwụ igwe na LLLT technology
LLLT bụ usoro ọgwụgwọ ntutu isi nke oge a na-abụghị ịwa ahụ nke na-eji ọkụ laser iji kpalite uto mkpụrụ ndụ na ntutu isi. Ọ na - enyere aka ịkwụsị ntutu isi ma melite olu na ọdịdị ntutu. Usoro ọgwụgwọ ahụ enweghi mgbu na enweghị mmetụta ọ bụla amaara.
LLLT akwadola FDA ka ọ bụrụ ọgwụgwọ ntutu isi maka ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị. A na-ejikarị ya eme ihe maka etrogenetic alopecia ma ọ bụ ihe a na-akpọkarị nwoke ma ọ bụ nwanyị nwanyị-isi nkwọcha.
laser ntutu regrowth ntutu laser igwe ụmụ nwanyị / nwoke ntutu regrowth akụrụngwa si Sano laser
Agwọ ntutu Laser bụ ọgwụ na-abụghị ọgwụ, ọgwụgwọ na-adịghị emerụ ahụ nke a na-ejikarị maka ọgwụgwọ ntutu isi. LLLT (ọgwụgwọ laser dị ala) na-ebute site na ngwaọrụ nwere oghere nke lasers nke na-enwu n'isi. SH650-1 laser regrowth machine bụ usoro dị elu nke ntutu ntutu isi laser, dabere na teknụzụ 650nm na 808nm dị larịị diode laser.
SH650-1 laser ọnwụ ntutu ọgwụgwọ laser ntutu re-ibu igwe afọ laser
Na-eme ka mgbasa ọbara na-eme ka ọ dịkwuo mma maka imeziwanye eriri afọ na ụba metabolism.
A na-eji laser 650nm na 630nm PDT mee ihe iji kwalite ọrụ Adenosine Triphosphate (ATP) na anụ ahụ dị n'okpuru. ATP bụ isi ihe na-enye ike n'etiti mkpụrụ ndụ iji gbaa metabolism ume. 650nm laser na 625nm PDT na-akpali ọbara na-ebugharị ma na-ebu ma oxygen na nri na ntutu isi, ebe 808nm laser na-enyere aka ịbanye - ihe niile na-ebelata ọganihu nke ntutu isi.
Ọrịa Co2 Laser, Shr Ipl Opt, Co2 Fractional Laser Machine, Ems Akwara mkpali Machine, otutu mwepụ mwepụ, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu,